သင့်ရဲ့တောက်ပသောအနာဂတ်အတွက် သင့်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကို မြှင့်တင်လိုက်ပါ
Ahlone Bahan Botahtaung Cocokyun Dagon Dagon Myothit (East) Dagon Myothit (North) Dagon Myothit (Seikkan) Dagon Myothit (South) Dala Dawbon Hlaing Hlaing Thar Yar Hlegu Hmaw Bi Htan Tabin Insein Kamaryut Kawhmu Kayan Kun Gyangon Kyauktada Kyauktan Kyee Myin Daing Lanmadaw Latha Mayangone Mingaladon Mingalar Taung Nyunt North Okkalapa Pabedan Pazundaung Sanchaung Seik Gyi Kanaungto Seikkan Shwe Pyi Thar South Okkalapa Taikkyi Tamwe Thaketa Thanlyin Thingang Kyun Thongwa Twantay Yankin Amarapura Aung Myay Thar Zan Chan Aye Thar Zan Chan Mya Thar Zi Kyauk Padaung Kyaukse Lewe Madaya Maha Aung Myay Mahlaing Meiktila Mogoke Myingyan Myittha Natogyi Ngazun Nyaung-U Pathein Gyi Pyaw Bwe Pyi Gyi Tagon Pyinmana Pyin Oo Lwin Singu Sint Gaing Tada-U Tatkon Taung Tha Tha Beik Kyin Thazi Wun Dwin Yame Thin
-- Select -- Business Management Programming Web Design Chinese Japanese Korean English Tuition Language Tutoring Service language Center Private Hight School Thai
ကျောင်းအမည် (သို့) သင်ရိုးအမည်ကိုရိုက်ပါ
ကျောင်းတည်နေရာ (မြို့နယ်) Select Township Ahlone Bahan Botahtaung Cocokyun Dagon Dagon Myothit (East) Dagon Myothit (North) Dagon Myothit (Seikkan) Dagon Myothit (South) Dala Dawbon Hlaing Hlaing Thar Yar Hlegu Hmaw Bi Htan Tabin Insein Kamaryut Kawhmu Kayan Kun Gyangon Kyauktada Kyauktan Kyee Myin Daing Lanmadaw Latha Mayangone Mingaladon Mingalar Taung Nyunt North Okkalapa Pabedan Pazundaung Sanchaung Seik Gyi Kanaungto Seikkan Shwe Pyi Thar South Okkalapa Taikkyi Tamwe Thaketa Thanlyin Thingang Kyun Thongwa Twantay Yankin Amarapura Aung Myay Thar Zan Chan Aye Thar Zan Chan Mya Thar Zi Kyauk Padaung Kyaukse Lewe Madaya Maha Aung Myay Mahlaing Meiktila Mogoke Myingyan Myittha Natogyi Ngazun Nyaung-U Pathein Gyi Pyaw Bwe Pyi Gyi Tagon Pyinmana Pyin Oo Lwin Singu Sint Gaing Tada-U Tatkon Taung Tha Tha Beik Kyin Thazi Wun Dwin Yame Thin
အမျိုးအစား -- Select -- Business Management Programming Web Design Chinese Japanese Korean English Tuition Language Tutoring Service language Center Private Hight School Thai
သင်တက်ချင်သည့်အတန်းချိန် -- Select -- 06:00 AM 06:30 AM 07:00 AM 07:30 AM 08:00 AM 08:30 AM 09:00 AM 09:30 AM 10:00 AM 10:30 AM 11:00 AM 11:30 AM 12:00 PM 12:30 PM 01:00 PM 01:30 PM 02:00 PM 02:30 PM 03:00 PM 03:30 PM 04:00 PM 04:30 PM 05:00 PM 05:30 PM 06:00 PM 06:30 PM 07:00 PM 07:30 PM 08:00 PM 08:30 PM 09:00 PM 09:30 PM 10:00 PM 10:30 PM 11:00 PM 11:30 PM
ပန်းတိုင်Mapသည် သင်၏အနီးအနားရှိ ပညာရေးဆိုင်ရာနေရာများကို ညွှန်ပြပေးနိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးမျိုးသော ဒေသကျောင်းများရှိသည်။ ထို့အတွက်ကို ပန်းတိုင်Map သည် အမျိုးအစားခွဲခြားကာ သင်၏ပညာရေးအကျိုးအတွက် သင့်တော်မည့်ကျောင်းများကို အကြံပေးလျက်ရှိသည်။
ပန်းတိုင်Map သည် ဒေသကျောင်းများသာမက နိုင်ငံတကာကျောင်းများ၏သတင်းအချက်အလက်ကိုပါမျှဝေပေးလျက်ရှိသည်။သင့်အနေဖြင့်ကိုယ်တိုင်သွားရောက်စုံစမ်းစရာမလိုဘဲ ပန်းတိုင်Map မှတစ်ဆင့် သိလိုသည့်အချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်သည်။
ပန်းတိုင်Map တွင်ကျောင်းများစွာ၏အချက်အလက်ကိုတင်ပေးထားသည်။သို့သော်ကျောင်းတစ်ကျောင်းစီတွင်ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်ထူးခြားသည့်အချက်များလည်းရှိပေသည်။ထို့ကြောင့်သင့်အနေဖြင့်ရွေးချယ်ရန် ခက်ခဲနေပါက သတင်းဆောင်းပါးများနှင့်အကြုံပြုချက်များကိုဖတ်၍ဆုံးဖြတ်နိုင်ပေသည်။
အကြံပေးချက် ထိပ်တန်းကျောင်းများနှင့်အကောင်းဆုံးအတန်းများကို ရှာဖွေလိုက်ပါ
Nyein Nyein San Japanese Language School ( Asia Selection...
Great Success English Language Academy & Boss Business...
Excellence English Language School
Mirai Japanese Language [Andaman Eight Co.,Ltd.]
NiJi Japanese Language School
Myanmar Logos Japanese Lasnguage School
ISSHIN Japanese Language School and International Co,ltd
Sky Okaasan Language & Vocational Education Academy
I.G.M (Japanese Language Centre)
U Htein Win Aung
LWIN Japanese Language Center
များပြားလှစွာသော အရောင်းအဝယ်များ သင့်လုပ်ငန်းကိုကြော်ငြာလိုက်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့ဆီမှအကောင်းဆုံးသောကြော်ငြာများကို ကြည့်ရှုပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်၍ သင်၏လုပ်ငန်းအကြောင်းကြော်ငြာလိုက်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်မှ တင်ဆက်ပေးနေသော စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဆောင်းပါးများ
၁။ မိမိတွင် တာဝန်ရှိသည်ဟုယူဆ၍...
ဇော်ဂျီမှာကော အားနည်းချက်ဘာရှိလို့လဲ။ ဇော်ဂျီကလည်း...
အားသာချက်၊ အားနည်းချက်၊ ယူနီကုဒ် ကို စသုံးရင်...